Deegaano ka tirsan Puntland oo galay xaalad go’doon ah – Hornafrik Media Network
Deegaano ka tirsan Puntland oo galay xaalad go’doon ah
By Liibaan Nuur	 On Nov 25, 2019
Guddoomiyaha deegaanka Gumbax ee gobolka Bari Cismaan Maxamed Balli oo lahadlay warbaahinta deegaanada Puntland ayaa sheegay in degaankaasi iyo guud ahaan deegaanada u dhaw ay ka jirto xaalad go’doon ah, kadib markii roobab mahiigaana oo ka da’ayey maalmihii lasoo dhaafay ay gooyeen waddooyinkii halbowlaha u ahaa, isu-socodka gaadiidka, dadka iyo duunyada.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in mudda 15 beri ah, aysan jirin wax gaadiid ah oo deegaankaas Gumbax iyo guud ahaan u dhaw taga, kuwaas oo ka baxi jiray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
“ In 15 beri ah, waxa weeye gobolka Guardafu iyo degaanka Gumbax wax baabuur ah oo yimid oo Boosaaso uga yimid oo badeecad u keenay ma jiraan. Dhibaatada dhacdayna waxa weeye, waddooyinkii baa go’ay, awalna hadde dalku waddooyin ma lahayn, kuwa macmil dadku ka shaqeeyo oo hadba meel dhagax saaro oo dhagax ka qaado ayay ahayd” ayuu yiri guddoomiye Cismaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in deegaanka Gumbax uu ka go’doonsanyahay dhinaca Badda oo sida uu sheegay loo baxsan lahaa wakhtigaan oo kale, kadib markii maraakiib iyo doomo jariif ah ay kalluumaysatadii degaanka u diideen inay u dhawaadaan oo gudaha u galaan Badda.
Farmaajo oo xilkii ka qaaday Xeer ilaaliyihii Qaranka mid kalena magacaabay
Soomaaliya oo 28-sano kadib, dib ugu biirtay Ururka la dagaallanka Ayaxa